5 astaamo oo wali ka badbaadaya isbedelka - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | logos, Khayraadka
Waan arki karnaa sida sannadkan 2018 iyo kan ugu yar iyo kan ugu dhow ee 2017 ay isbeddello ugu yimaadeen astaamaha oo ka yimid noocyo badan. Sawirkani wuxuu xiriir la leeyahay warbaahinta cusub ee ay saameeyeen. Laakiin sidoo kale, in la siiyo midab hababka cusub ee bulshada maanta, oo umuuqda inay ku dheehan tahay astaan ​​badan.
Taasi waa sababta sawirradu si isa soo taraysa loo fududeynayo in kasta oo ay jiraan qalabyo jira oo ka dhigaya kuwo casri ah. Midab la'aanta iyo midabbada, dhammaadka inta ugu yar ayaa wali ah. Inkasta oo noocyada qaar aysan wali ka hadlin isbedelkan, ama sababta oo ah astaantoodu waxay sii wadaysaa inay metelayso tan casriga ah ama sababtoo ah ma helin beddel. Weli, waxaan u maleynayaa in midkoodna uusan rabin isbeddel iyaga ka dhaca
4 Mcdonalds ayaa sidoo kale halkan ku soo dhuumanaya
5 Sumadda Shell
Nooca madadaalo ee dadka waaweyn, ku dhashay Chicago. Heirloom laga soo bilaabo maalmihii markii naqshadeynta astaanta ay ahayd mid raqiis ah oo faraxsan, Bakayle ciyaartu waxay qaadatay nus saac in la sawiro sanadkii 1953, sida uu sheegayo Art Paul, oo ahaa agaasimaha farshaxanka majaladda xilligaas.
Leysinka Playboy ee astaantiisa, laga bilaabo dharka iyo alaabada qurxinta ilaa baararka iyo naadiyada, hadda waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan. In kasta oo warar xan ah oo sheegaya in joornaalka ay xirmayso ay si gaar ah u duulayeen tan iyo dhimashadii Hugh Hefner ee 2014, Playboy ayaa kaalinta 42-aad kaga jira liiska 150-ka sare rukhsad bixiyeyaasha adduunka oo dhan. Uma xuma astaan ​​deg deg ah oo jaban.
Kahor, astaamaha waxay umuuqdeen kuwa aan waxba galabsan. Waxay ahayd aqoonsi fudud oo ku saabsan sheyga aad iibin lahayd. Maanta, taasi ma sii ahaanayo qof kale, mana ku dhiirranayo inuu keligiis sameeyo. Maanta istuudiyaha naqshadeynta ayaa loo kireystay inay baaraan suuqa iyo badeecada shirkadda, daraasado waaweyn oo ku saabsan suuq-geynta iyo qaabeynta si loogu dhowaado astaamaha guusha. Nidaamyadani waa qaali waxayna qaataan waqti badan.
Marka laga hadlayo Nike, waqtiga ayaa ugu yaraa iyo qiimaha, lacagta doqonimada ah ee ah 35 dollar ardayda Portland. Aniguna waxaan dhihi karaa waa qosol, maxaa yeelay astaanta dhowr saacadood waxay umuuqataa macquul in aysan ahayn qadar badan oo ay tahay in lagu bixiyo sawir, laakiin markii la arkay saameynta sumadda, waa wax lala yaabo in la yiraahdo ugu yaraan.
Haa, waa run, isbeddelo waaweyn ayaa soo ifbaxay tan iyo markii la abuuray Coca-Cola, sidoo kale isbadallada waaweyn ee ay ku qasbanaadeen inay ku sameeyaan qeybahooda. Waana in sawirku is beddelay waqtigaas markii uu ka takhalusi lahaa maandooriyaha maandooriyaha ah oo ka mid ah noocyadiisa. Laakiin ka dib markii la dhisay astaanta maanta ee 1886, ma arag isbeddelo waaweyn ama kala duwanaansho xusid mudan.. Qaar ka mid ah dib-u-dhiska yar ee aan baabi'ineynin astaanta astaamaha astaamaha ee leh matalaadda ugu weyn dhammaan waddamada marka laga reebo Cuba iyo Waqooyiga Kuuriya.
Mcdonalds ayaa sidoo kale halkan ku soo dhuumanaya
Shirkadda cunnada degdegga ah ee muhiimka ah waxay umuuqataa meelwalba. Uma maleynayo inay tahay mid iska timid. Laakiin waa taas tan iyo markii la abuuray lixdameeyadii iyo iyadoo in kabadan 36.000 maqaaxiyo ay ku faafeen 120 wadan wax isbadal ah kuma uusan helin muuqaalkiisa. Jaalaha 'M' sida laba qaansooyin oo ku yaal salka casaanka ayaa weli ah tan iyo markaa waana taas sababta markaan u aragno isku-dhafka midabka, astaanta ayaa maskaxda ku soo dhacaysa. Calaamado malahan Sidii loogu yaqaanay Taallada Xorriyadda, waxay u noqotay astaan ​​muuqaal ah oo ah cunnooyinka degdegga ah, in kasta oo ay tartamayaan.
Summad laga yaabo in aan sidaa lagu aqoonsan jaleecada hore adduunka oo dhan. Ma lahan saameyn la mid ah noocyada cuntada degdega ah ama kuwa isboortiga ah ee aan subax kasta cagaha saareyno. Laakiin muhiimadu waa isku mid ama waxay kuxirantahay qofka aad weydiiso heer ama ka yar. Shell waxaa la aasaasay 1897 iyo toddobo sano ka dib markii la abuuray, waxay heshay astaanta hadda ee astaanta laakiin wax aad u adag. 1971 waxay fududeeyeen dhamaan waxyaabihii 'hadhay'. Waqtigaas oo dhan ka dib, sawirku wuxuu leeyahay aqoonsi wanaagsan isha qaawan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 5 astaamo oo wali ka badbaadaya isbedelka